Ururka Al Shabaab Oo Sheegtay Weerarkii Saakay Ka Dhacay Agagaarka Dekedda Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ururka Al Shabaab Oo Sheegtay Weerarkii Saakay Ka Dhacay Agagaarka Dekedda Muqdisho
Xuseen Axmed 11 December 2016
Ururka Al Shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyada weerarkii ismiidaaminta ahaa ee saakay ka dhacay Agagaarka Dekedda weyn ee Magaalada Muqdisho kaasi oo ay ku waxyeeloobeen dad shacab ahaa oo aan waxba galabsan.
War rasmi ah oo kasoo baxay Dagaalyahanada Al Shabaab ayay ku sheegatay Mas’uuliyadda Weerarka sarkaal ka tirsan Ururka Al Shabaab oo la hadlay warbaahinta ku hadasha Afka Al Shabaab ayaa sheegay in 30 askari ay ku dileen Qarax ka dhacay Agagaarka Dekedda weyn ee Magaalada Muqdisho.
“Geesi ka mid ah guutada Istish-haadiyiinta ee Ururka Al-Shabaab ayaa waabarigii hore ee saaka camaliyad Istish-haadi ah ku weeraray xero ciidan oo ku taalla Agagaarka Dekedda weyn ee Magaalada Muqdisho Iyadoona camaliyadaas ay geysatay khasaare aad u xoogan” ayaa lagu yiri war lagu baahiyay Page-ka idaacadda Andalus ee internet-ka.
Dhanka Laamaha amaanka dowladda Federaalka Soomaaliya oo Qaraxa ka hadlay ayaa sheegay in Qaraxii saakay ay ku dhinteen dad shacab ahaa oo u badnaa xamaaliyaasha ka shaqeeya Dekadda weyn ee Magaalada Muqdisho.
Daawo Sawirada: Qaraxii xooganaa ee ka dhacay Albaabka Dekadda Muqdisho iyo Dhimashada oo sii korortayWaxaa saakay qarax aad u xoogan oo loo